Iprogram ye-Web Scraping Programme ephakanyisiweyo
Okwangoku, ukutshitshiswa kwewebhu kuye kwaba yicwangciso leshishini eliyimfuneko malunga nayo yonke imibutho eyayithatha. Ngelishwa, le nkqubo ayizange iqhutywe ngokupheleleyo ngenxa yemingeni ethile. Ewe, unokwenza uphando lwe-intanethi ukufumana umxholo ofuna, kwaye unokuyikopisha - calcul dheures de travail gratuit. Nangona kunjalo, oko kuyenzeka kuphela ngenani elithile leenkcukacha. Ngokuqinisekileyo uya kufuna i-web scraping tool ukuvuna inani elikhulu leenkcukacha. Umngeni omkhulu kunayo imfuneko yenkqubo yamava.
Kufuneka ube neliqela elithile lamava olwazi kunye nolwazi ukuze ukwazi ukuqwalasela amaninzi amathuluzi okutsala iwebhu ngokufanelekileyo.Kodwa abantu abambalwa kakhulu banamava enkqubo. Ngaphandle koko, isilathisi sokucoca i-intanethi idibanisa kwaye ichitha ixesha ixesha elide kubafundi abanamava kakhulu. Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, ungadinga ukuguqula ikhowudi yesofthiwe yakho kuyo yonke i-website ejoliswe kuyo kuba zonke iiwebhusayithi zihlukile. Yingakho esi sixhobo sewebhu esitsha sithatha ihlabathi ngokuqhwithela. Akufuneki ukuba nolwazi lwenkqubo, kwaye lusebenza kakuhle. Igama le sixhobo i-OutWit Hub
I-OutWit Hub ngokwenene i-Firefox add-on engayilanda kwaye ifakwe kwisiphequluli sakho.Ngesofthiwe, uza kuluhluza iiwebhsayithi ezahlukeneyo kunye neefowuni ezimbalwa ze mouse yakho. Nangona iprogram inamakhono okwehlula iintlobo ezahlukeneyo zewebhu kunye nezicwangciso ezizenzekelayo, ungayifumanisa kwakhona ukuze uhambelane neemfuno zakho.
Nantsi indlela yokusebenzisa i-Software
Udinga ukuyikhuphela kwi-store ye-Mozilla isitoreji kwaye ufake kwi-browser yakho ye-Firefox. Emva kokufakwa, i-add-on ayiyi kusebenza kuze kube yilapho uqala kabusha isiphequluli sakho. Uza kufumana okukhethwa kukho okulula kokukhethwa kwindlela ekhohlo kwesicelo. Nangona ezi zikhetho ziyisiseko, zanele ukuba ukhuphe imifanekiso efunekayo kunye nesicatshulwa kwiphepha lewebhu okanye nayiphi na ikhonkco kwiphepha.
Nangona kunjalo, ukhetho oluyisiseko alukwazi ukwenza imisebenzi ephambili yokukhangela iwebhu. Ukuba udinga ukhetho oluphambili, kufuneka uhambe kwi-Automators, uze uhambe kwicandelo lama Scrapers. Ikhowudi yomthombo wephepha lakho lewebhu elijoliswe kuyo liya kuboniswa apha. Isinyathelo esilandelayo kukujonga iimpawu ezifakiwe kwi khowudi. Zingasetyenziswa njengeemakishi ezixhobo zakho ezifunekayo ngaphambi kokukhutshwa.
Ngoku, kufuneka ugcwalise "uMakishi phambi" kunye ne "Marker emva", kwaye nqakraza iqhosha lokuqhuba. Emva koko, kufuneka uhlale kwaye ubukele indlela i-OutWit Hub eyenza ngayo umsebenzi wayo. Le nkqubo inika inkululeko yokusebenzisa ama-multiple scrapers ngexesha elifanayo, oko kuphucula ixesha lokujika.
Le yinkqubo eqhelekileyo yokukhipha idatha. Icandelo leenkcukacha ze-add-on liza kunye nezifundo ezahlukeneyo zezicelo ezahlukeneyo zokukhutshwa kwedatha / iimfuno. Uya kufumana iinkqubo ngokukhawuleza kwaye kulula xa uziqonda. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba ufunde iinqununu zonqulo.
I-Hub ephumayo inegunya lokusingatha izicatshulwa zeenkcukacha eziyinkimbinkimbi kunye nemisebenzi yayo emininzi. Ngoko, unokufuna ukuqonda yonke imisebenzi. Ngokomzekelo, ukukhipha idatha kwiindawo ezininzi ezijoliswe kuzo ezifanelekileyo izakhiwo, udinga umsebenzi obizwa ngokuthi "Fometha Ikholamu".
Ekugqibeleni, i-OutWit Hub iyinxalenye enkulu yokucoca idatha eyongezelelweyo kubo bobabini beprogram nabangewona program. Inemisebenzi emininzi ekufuneka ufunde. Imisebenzi eyinkimbinkimbi oyisebenzisayo, ngokukhawuleza nangcono, iziphumo zakho zokukhangela iwebhu ziya kuba.